[Beyond Fest 2020] Ongororo: 'Archenemy' A Gritty Tora Mashura uye Aimbove Kubwinya - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau [Beyond Fest 2020] Ongororo: 'Archenemy' A Gritty Tora Iwo Magamba uye Aimbove Kubwinya
[Beyond Fest 2020] Ongororo: 'Archenemy' A Gritty Tora Iwo Magamba uye Aimbove Kubwinya
by Jacob Davison October 17, 2020 1,550 maonero
Iyo yepamusoro gamba genre mumakore akati wandei apfuura rave tentpole ye cinema uye pop tsika, kune iri nani kana yakaipa. Mukuita kudaro, kune makuru mafranchise senge The Avengers, Batman, Spider-Man uye zvichingodaro, ndakakwidziridza bhuku remakomiki kunoenderana nemamirioni-emadhora emadhora. Asi zvakadaro pane mhando dzakasiyana dzenyaya dzekutaura uye dzakawanda dzinogona kutaurwa pasi, panzvimbo pematenga. Zvakadai sekunge kana gamba rakarasikirwa nemasimba avo? Chii chavanoita zvino? Iyi ndiyo seti-kumusoro ku Archenemy.
Max Fist (Joe Manganiello, Ropa Rechokwadi) ndiro gamba rine simba kwazvo muchadenga. Zvirinani kuti aive. Zvino, iye ndiye asina pekugara uye chidhakwa pamwe anogona kunyepedzera kwekunyepedzera kwehukuru uye dambudziko rekutsamwa. Kubaya zvidhina madziro uye kuda kugona kubaya nezvivakwa sezvaanoti aigona. Iye ari pasi pechiziviso muguta hombe, akasekwa nemubhawa wake uye akabatwa semunhu anonetsa kusvikira asangana nemumwe munhu anoda kumuteerera. Hamster (Skylan Brooks, Pfungwa Dzakasviba) ndeyemuno vlogger uye mutori wenhau anotsvaga hombe scoop, uye iye anoona mukana wake naMax. Kunyangwe aine kusahadzika pamusoro peMax Fist's fantastical stories of super heroics and his yakaipa Archenemy from his home universe, ivo vangangoita varaidzo. Asi iye achazoda rubatsiro rwaMax apo hanzvadzi yake Indigo (Zolee Griggs, chidimbu) inokomberedzwa neManeja (Glenn Howerton, Inogara Iri Zuva Zuva MuPhiladelphia) ane utsinye crimelord uyo anoda Indigo muma clutches ake. Iye zvino vanun'una vanofanirwa kubatana naMax Fist uye voona kuti nyaya dzake refu ndedzechokwadi here kana kuti ari benzi. Kana pamwe zvese zviri zviviri?
Archenemy inouya kubva kumunyori / director Adam Egypt Mortimer, uyo akatipa pfungwa dza2019 uye kuita bhaisikopo rinotyisa Danieri Haasi Chaiye. Zvakawanda seprojekiti yake yekupedzisira, akagadzira chimwe chinhu chinoshora kuvezwa mubhokisi mune rimwechete remaitiro kana maitiro. Archenemy ndeye yekuita mhosva firimu, inonakidza yepfungwa, gamba gamba bhaisikopo rakatendeuka pamusoro waro. Uye hazvigone kuuya panguva iri nani. Kunyangwe ini ndisingataure kuti vanhu vanorwara nemagamba emafirimu, pane kumwe kuneta kunobva pamiganhu yenyaya dzavo. Uye izvi zvinovasvitsa chaimo kuburikidza navo. Chokwadi nekunyengera kwaMax Fist zvakachengetwa mudenga, nezviratidzo uye nemijenya izvo zvinoita kuti vateereri vabvunze chokwadi chezvaanofungidzirwa kuti zvakanyanya. Asi havazopokana kuti iye muchina wekurwa.
Joe Manganiello anopa gehena rekuita saMax. Fungidzira akatsamwa Thor kana Superman vachirwira nekurasikirwa kwake kuzivikanwa, kwesimba. Kunyangwe akapenga, haugone kubatsira asi kunzwira tsitsi mukomana, kunyangwe akabaya masvingo ezvitina kuti anzwe chimwe chinhu uye anogona kupwanya dehenya remurume nemaoko ake asina maoko. Asi zvekare, zvinogona kungove kutenda kune ese madhiragi uye doro mune yake system. Skylan Brooks naZolee Griggs vanoratidzika sevasingazive 'sidekick' yavo kunyangwe ivo vaine pfungwa iri nani uye zvine hungwaru kupfuura vangangori gamba. Zolee saIndigo anoratidza hunyengeri husinga tsanangurike uye haana hanya, kunyangwe paanopokana naye uye anoiswa mumamiriro akasimba nepfuti chaidzo kumusoro wake. Hamster inyanzvi yekuteerera vateereri uye inopa rutsigiro kuna Max Fist nyaya. Kupa iyo-yepasi rose maonero pane zvakavanzika uye nekubatana kwake nenyika dzezuva nezuva. Uye Glenn Howerton anopenya achienda akazara villain seManeja asinganetsi. Kuwedzera mamwe maquirks kune njodzi ine njodzi uye inotsamwa kwazvo.
Mufananidzo kuburikidza neYouTube
Zviitiko zvezviito zvinoshungurudza pese panobuda Max Fist. Zvingave nemapombi, pfuti, kana kungoita semaoko ake anoita seasingaputsike, Max anogadzira nyama yakakangwa kubva kune chero munhu ari munzira yake. Kunyanya kana akadhakwa. Uye zvinyengeri zvaMax zvakapfuura uye zvingangoitika zvinobatwa zvinehunyanzvi neakanyanya kupenya uye surrealist akateedzana eanofamba maitiro enyambo maitiro uye rotoscoping. Kwakatangira kwaMax ibhuku rinonakidza remhando yekufungidzira nyika, saka zvinongonzwisisika kuti vanoratidzwa zvakanyanya. Izvo zvinoitawo kuti pave nemusiyano unonakidza pakati peiyo sci-fi maficha uye yakanyanyisa kunyarara uye kudonha chokwadi Max anozviwana abatwa mukati. Iwo marongero anotenderera uye anotendeuka pamwe chete, achifambidzana nenzira yakanaka yakaenzana kunyangwe dzimwe nguva dzakadhonza zvishoma.
Ndakave nerombo rakanaka kuti ndiwane ruzivo Archenemy paBeyond Fest 2020 paMission Tiki drive-in uye kwaive kuputika pachiratidziri chikuru. Zvakare, vatevedzeri nevashandi vanosanganisira Adam Egypt Mortimer naJoe Manganiello (Nembwa yake, Bubbles!), Skylan Brooks, Zolee Griggs nevamwe vanosanganisira vagadziri veSpectrevision vaivepo nemota yeLegion M yemifananidzo-ops uye intros.
Mufananidzo Chikwereti Lisa O'Connor: Director / Munyori Adam Egypt Mortimer, Joe Manganiello, Anoputira imbwa naEria Wood
Archenemy yainakidza sezvainge zvichidambura moyo uye kumenya kumeso. Kunyangwe vanhu vasati vaziva zita rekuti "Max Fist", vanovimba vanozove vakaiswa mari sezvakaita Hamster.
Archenemy yakagadzirirwa kusunungurwa muna Zvita 11, 2020.